Safiirka Norwey ee Mareykanka: Soomaalida Norway iyo kuwa Mareykanka kunool, waa kaaf iyo kala dheeri - NorSom News
Safiirka Norwey ee Mareykanka: Soomaalida Norway iyo kuwa Mareykanka kunool, waa kaaf iyo kala dheeri
Safiirka dowlada Norway u fadhiyo wadankan Mareykanka Ambassador Kare R. Aus, ayaa shaley socdaal indho-indheyn ah ku tagey magaalada Minnesota oo ay kunool yihiin jaaliyad soomaaliyeed oo aad u badan. Kare R. Aus ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliyay safiirka Soomaaliya u fadhiyo wadanka Mareykanka, Ambassador Ahmed Ciise Cawad.
Safiirka Norway ayaa qirey in soomaalida Minnesota ay xaga horumarka ay wax badan kaga horeeyaan soomaalida wadankan Norway. Waxa uuna sheegay in Soomaalida Norway ay u baahantahay in wax badan ka barato reer Minnesota. Si gaar ah wuxuu safiirku u magacaabey horumarka xaga waxbarashada, ganacsiga iyo kamid noqoshada bulshada oo soomaalida reer Minnesota ay ku yihiin hormuudka ajaaniibta kunool deegaankaas. Amassador Kare ayaa lagu soo wareejiyay ganacsiyo iyo dukaamo badan oo ay leeyihiin soomaalida gobalkaas degan. Waxa uuna carabaabey inuu waxyaabihii uu halkaas kusoo arkey uu ka diyaarin doono rapport, uuna u diri doono dowlada Norway, si wax looga badalo xaalada soomaalida reer Norwey.
Hadii reer Minnesota ay ku fakarayaan horumar, ganacsi iyo waxbarasho, reer Norwey wadnaha ayay farta ku hayaan oo nin walbaa wuxuu kujiraa gacmo ku gabad. Bulsho Listhaug iyo FRP laga adeejiyay oo aan wadanka cago badan ku fadhiyin, goormey horumar ku fakarayaan tolow?
Halkan ka dhageyso wareysiga Ambassador Cawad iyo BBC
Previous articleWaalidiinta ajaaniibtu waxay ku fakarayaan dhaqankii wadankii ay ka yimaadeen, marka ay ilmaha waxbarasho talo ka siinayaan
Next articleArendal: Soomaalida oo sanadkan si fiican uga qaybqaadaneyso barnaamijka TV-aksjonen